Notice: Use of undefined constant php - assumed 'php' in /home/purposeofthelife/public_html/alqurantranslation.com/wp-content/themes/colormag/Quran Template/Burmese.php on line 1
Translation of Meaning of Quran into Burmese | AlQuranTranslation
Home > Dowload Quran > Burmese
ဗီဒီယိုများ စီးရီး ဆက်လက် များအတွက် YouTube ပေါ်မှာ ဗီဒီယိုများ နောက်ဆက်တွဲ လင့်များ သွားရောက်ကြည့်ရှု ပေးပါ
Burmese Translation of the Holy Quran (PDF Format)	Burmese translation of the Quran (PDF Format 13.3 MB)
Burmese Translation of the Holy Quran (PDF Format)	By Burmese Myanmar translation of the Quran Vol. 1 (PDF Format 52.5 MB) my4342-Volume1.pdf
Burmese Translation of the Holy Quran (PDF Format)	By Burmese Myanmar translation of the Quran Vol.2(PDF Format 49.7 MB) Translation-of-the-meanings-of-the-Noble-Quran-in-the-Myanmar-Volume2-Burmese-language.pdf
စူရဟ် Yasin မြန်မာဘာသာပြန်စာပေ, သန့်ရှင်းသောဘုရားကုရ်အာန်ဗမာ, ဗမာထဲတွင်အယ်လ်ကုရ်အာန်ဘာသာပြန်စာပေ, myanmar quran စာအုပ်, မြန်မာအစ္စလာမ့်တဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေ, ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်မြန်မာဘာသာစကား, မြန်မာ့စာအုပ်တွေကိုအခမဲ့ download, ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်၏မြန်မာ, ဘာသာပြန်ချက်, ဗမာထဲတွင် MP3 ကိုကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်, မြန်မာကုရ်အာန်ဒေါင်းလုပ်မွတ်စလင်မြန်မာကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် မြန်မာ Noble ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်, ဗမာထဲတွင်မြန်မာ kuran download, မြန်မာ quran Symbian, kuran မြန်မာစာသား, ဗမာထဲတွင်အခမဲ့ download kuran ကျြ, ဗမာ quran ကျြ, ဗမာ quran မိုဘိုင်း, မြန်မာ့ quran free mp3, ဗမာထဲတွင် quran အဓိပ္ပာယ်ကိုမြန်မာ quran pdf ကို download လုပ်ပါ, အယ်လ် quran
Surah Yasin Burmese Translation, Holy Quran Burmese, Al-Quran Translation in Burmese, myanmar quran book, Myanmar Islamic websites, Quran Myanmar language, Burmese books free download, Burmese translation of Quran, MP3 Quran in Burmese, Burmese Quran Download, Muslim Burmese Quran, Burmese Noble Quran, Burmese kuran download, Burmese quran symbian, kuran Burmese text, free download kuran in Burmese, Burmese quran, Burmese quran mobile, Burmese quran mp3, quran meaning in Burmese, download Burmese quran pdf, al quran in Burmese